Banyere Anyị - IntegritySyndicate.com
Mbido gbasara Anyị
E guzobere Integrity Syndicate ka ọ bụrụ ngwa nrụpụta iji weghachi Iso Ụzọ Kraịst nke narị afọ nke 1. Anyị bu n'obi ibugharị ezigbo Otu Ndịozi okwukwe na ikwusa nchegharị maka mgbaghara mmehie na Oziọma nke alaeze Chineke site n'aka Kraịst Jizọs Mezaịa. Ndị Edemede Okwukwe bụ ozizi bụ isi nke Oziọma Ọgbụgba Ndụ ọhụrụ anyị na -ejigide. Anyị na -emesi ime ihe ike ike ke ima, ke akpaniko, ye ke Spirit. Anyị na -agbakwa mbọ ịdị n'otu nke ndị Chineke niile na isoro ndị furu efu n'ụzọ ime mmụọ ekerịta ozi ọma nke nzọpụta.
Bible bụ akwụkwọ ikike anyị bụ isi maka ịghọta eziokwu ndị dị mkpa. Anyị na -achọ ịghọta Akwụkwọ Nsọ na mbido mbụ ruo n'ókè o kwere mee site na nkatọ ederede. Anyị na -agba ndị otu ume ka ha na -agụkarị Bible ma na -amụ Akwụkwọ Nsọ n'asụsụ mbụ.
Usoro mweghachi anyị iji nwetaghachi ezi Iso Ụzọ Kraịst dabere n'ụkpụrụ ndị a:
Anyị kwenyere n'ọkwa nke Akwụkwọ Nsọ.
Anyị kwenyere na akụkụ Akwụkwọ Nsọ nwere nghọta.
Anyị kwenyere na njikọta nke Akwụkwọ Nsọ.
Anyị na -agọnarị na ewu ewu nke otu echiche na -ekwe nkwa eziokwu ya.
Anyị na -anabata na iweghachi otu nkuzi ma ọ bụ omume nwere ike ịkpaghasị ndị ọzọ.
Njikọ: Otu ndị mmadụ na -arụkọ ọrụ ọnụ ma na -enyere ibe ha aka iji nweta otu ebumnuche.
"Chineke lefuru oge amaghị ama anya, mana ugbu a, ọ na -enye mmadụ niile iwu ka ha chegharịa, n'ihi na o wepụtala ụbọchị ọ ga -ekpe ụwa ikpe n'ezi omume site n'aka onye ọ họpụtara; na nke a ka o nyeworo mmadụ nile mmesi obi ike site na ịkpọlite ​​ya site na ndị nwụrụ anwụ. ” (Ọrụ 17: 30-31)
Ọ bụ ịhụnanya na -akwalite anyị, eziokwu na -eduzi anyị, mmụọ nke Chineke na -enyekwa anyị ike. Na njem anyị, obodo anyị na ozi anyị, anyị ga -ahazi ihe atọ a.
Chineke bụ Ịhụnanya. Ka ịhụnanya Chineke zuo oke n'ime anyị ka anyị bụrụ ndị na -eso ụzọ Kraịst n'ezie
Oziọma Ọrụ bụ Oziọma Jizọs Kraịst dịka akwụkwọ Ọrụ Ndịozi siri kwuo
Otu Chineke dị, Nna, onye ihe niile sitere na ya na onye anyị dịịrị maka ya (1 Ndị Kọrịnt 8: 5-6)
E nwere otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, nwoke ahụ bụ Kraịst Jizọs, onye nyere onwe ya ka ọ bụrụ ihe mgbapụta maka mmadụ niile. (1Ti 2: ​​5-6)
Ụmụ Chineke na -asụ ude n'ime obi ha na -eche maka nkuchi - olileanya nke mbilite n'ọnwụ
Ụkpụrụ nchegharị nke ndịozi - Chegharịa ma kwere n'Oziọma
Ịghọta ụkpụrụ na atụmanya nke ịnata onyinye nke Mmụọ Nsọ
Nchịkọta nke mkpa ekpere dị na ntuziaka maka otu anyị kwesịrị isi na -ekpe ekpere
Ana m agụ ihe niile dị ka mfu n'ihi oke uru nke ịmara Kraịst Jizọs Onyenwe m (Ndị Filipaị 3: 8)
https://LukePrimacy.com – Ihe ndabere maka ijide Luk-Ọrụ dịka onye akaebe mbụ nke Iso Ụzọ Kraịst
Blọọgụ / Saịtị ogbe
LukePrimacy.com – Ndabere nke Luk-Ọrụ Primacy
OnenessRefutation.com - Nsogbu na nkuzi otu (Modalism)